China Factory Bulk Mink Eyelashes Vendor 3D Lashes with Private Label Eyelashes Box factory and manufacturers | Weiti
I-Factory Bulk Mink Eyelashes Umthengisi we-3D Lashes nge-Private Label Eyelashes Box
1, i-DONNA yesitayela se-mink eyelashes
Imivimbo engu-2, 14mm yemvelo ethambile
Isevisi ye-3, i-OEM ne-ODM inikelwe
I-4, isitoko esikhulu esilungele ukuthengiswa
√Imivimbo ye-Kalocils 3D mink yenziwa ngezinwele eziyi-100% zangempela ze-mink, ekhishwa ezinweleni zemvelo eziwayo, futhi ihlanjululwa. Ngeke neze silimaze izilwane! Ama-mink eyelashes ethu yi-hypoallergenic, awanamakhemikhali, awalimazi amehlo akho.
√Lezi eyelashes ze-mink zenziwe ngesandla ngabachwepheshe. Umsebenzi omuhle emapheshana nemivimbo ye-wispy. Idizayini yangempela ye-3D, inezingqimba zemvelo ezinhle futhi ezisongekile, umphumela wezimonyo ezahlukahlukene. Fluffy futhi ukubukeka amadlingozi kodwa yemvelo. Kukwenza ucace, ubenyezele, ucwebe futhi ubukeke.
√Le mivimbo enguManga mide futhi iminyene, unganciphisa ubude ngokuya ngezidingo zakho. Imivimbo engu-Arison 3D mink iyasebenza futhi, ingasetshenziswa izikhathi ezingaphezu kwezingu-15 ngaphansi kwezimo ezijwayelekile. Kulula ukufaka isicelo, akulula ukulahla. Ilungele ochwepheshe noma abaqalayo nje.
√Le nkophe eyimbumbulu ayisindi futhi ithambile, awukwazi nokuzwa isisindo sayo uma usigqoka. Kunethezeka ngempilo yansuku zonke, emsebenzini, noma ukuya ephathini. Kuzokwenza amehlo akho akhanye. Lokhu futhi kungukukhetha kwakho okuhle kwesipho.
Langaphambilini I-OEM 3D Eyelashes Mink Lashes Makeup Madeup Makeup Full Strip Lashes
Olandelayo: Ama-Top Quatity Handmade Factory Strip 3D 14mm ahlala isikhathi eside ama-Mink Lashes
ilebula langasese lebhokisi le-eyelash
Fluffy Isitolo esidayisa yonke impahla 3D Strip Mink Eyelash Manufact ...
Inqwaba Yakha Ilebuli Yakho Eyimfihlo Eyenziwe Ngam ...
3D Mink Eyelashes Ezenziwe Ngesandla Yemvelo Bheka Reusabl ...
3D Mink Eyelashes Izimonyo Isitolo esidayisa yonke impahla Min False ...
Isitolo esidayisa yonke impahla Ilebula Private 100% Ezenziwe Ngonya F ...
Isitolo esidayisa yonke impahla ngokwezifiso Ilebula Amabhokisi 3D Las ...
Abadayisi bezinkophe, Ukuqhuma Kwamehlo, imivimbo ye-mink, i-eye liner, Izandiso ze-Eyelash, ezambiwa,